Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii Gaalkacyo & Puntland oo ka hadashay – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii Gaalkacyo & Puntland oo ka hadashay
Dagaaladii cuslaa ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ka aloosnaa qaybo ka mid ah magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, oo xoogiisa uu maanta uu dhacay ayaa iskiis u joogsadey gabaldhicii galabta xiliga bariga Afrika.
Dagaalkii saaka qarxay ayaa ka cuslaa kii shaley waxaana sii kordhaysa khasaaraha naf & maalba leh ee ay sababeen dirirtan colaadeed ee Mudug ka oogan, iyadoo khasaaruhu isagu jiro dhimasho, dhaawac, burbur hanti & barakac.
Goobaha ay ku xooganayeen dagaaladii maanta waxaa ka mid ahaa xaafada Garsoor dhanka Galbeed & Koonfur waxaa kale oo uu saameeyey xaafada Israac iyadoo sidoo kale dagaalku uu saameyn ku yeeshay dhanka Koonfurta magaalada ee maamulka Galmudug.
Dagaalka maanta waxaa ku dhintey ugu yaraan 25 qof waxaana ku dhaawacmey 50 kale iyadoo dhimashada labada maalmood ay gaarayso 36 qof halka dhaawacuna uu gaarayo 90 qof.
Dadka dhintey & kuwa dhaawacmayba dagaalkan ayaa u badnaa dhinacyadii dagaalamayey ee ciidamada Booliiska Puntland & kooxo hubaysan oo ay dawladu ku tilmaamtey inay ka mid yihiin Al-Shabaab, hase yeeshee ilo wareed oo madaxbanaan ay sheegayaan inay ka tirsan yihiin mid ka ah beelaha gobolka Mudug wada dega.
Walow dhimashadu iyo dhaawacu u badan yahay xoogaga dagaalamaya hadana waxaa jira dhimasho & dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ku kala sugnaa Waqooyiga & Koonfurta Gaalkacyo kuwaasi oo ay ku dhaceen rasaastii la iswaydaarsanayey ee wiiftada & waliba madaafiic shiish wareertey & kuwa la isku adeegsadey dagaalka.
Madaafiicda waxyeelada geysatey waxaa ka mid ahaa Hoobiyeyaasha, Jiibka & B10-ka waxaa kaloo jira in dagaalka si ba’an la isugu adeegsadey qoryaha lidka diyaaradaha & dabamiishaarka oo masaafo fog waxyeelo ka geystey.
Isbitaalada magaalada Gaalkacyo sida Isbitaalka Guud, Isbitaalka GMC ee waqooyiga ku yaal & kan ku yaal dhanka Koonfureed ee MSF waxaa wali daadsan dhaawacyada dagaalka, waxaa jira warar SBC ay heshay oo sheegaya in maleeshiyaadka ka soo horjeeda ciidamada Booliiska ee la dagaalamaya in qaarkood dhaawacooda la geeyey dhanka Koonfureed oo lagu dabiibayo Isbitaalka hay’adda MSF gacanta ku hayso.
Isgaarsiinta & Korontada oo go’ay.
Isgaarsiinta telefoonada ayaa qaarkood hawada ka baxeen mudo saacado ah iyadoo shirkada telefoonada gacanta ee mobile-ka bixisa ee Nation Link ay sheegtey inay waxyeelo ka soo gaaray madaafiicda & rasaasta mid ka mid ah tower-da shirkada taasi oo sababtey in ay hawada ka maqnaato adeegii shirkada.
Sidoo kale shirkada Korontada uggu weyn ee magaalada Gaalkacyo oo lagu magacaabo NEPCO ayaa adeegeedii korontada wuxuu ka go’ay magaalada taasi oo loo aaneynayo dagaalka oo saameyn ku yeeshay, waxaase dib ugu soo laabtey adeegaasi iyadoo sidoo kale adeega Internet-ka uu ku yimid hakad mudadii uu dagaalku socdey.
Dagaaladan waxay sidoo kale hakad baaxad weyn ku keeneen dhaqdhaqaaqii gaadiidka & ganacsiga waxaa lagu kala cararay suuqyada magaalada, waxaa sidoo kale albaabada la isagu laabay xarumihii xawaaladaha, ganacsiga sida bakhaarada, maqaaxiyadaha & biibitooyinka.
Waxaa waxyeelo soo gaartey dhismayaal dabaqyo ah oo ku yiil magaalada & kuwa caadi ah oo ay ku dhaceen madaafiic & hubkii cuslaa ee lagu dagaalamayey.
Barakac & qax ayaa ka dhacay goobihii la isku hirdiyey iyadoo dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku dhaqnaa ay u firxadeen goobo ay kaga amaan galaan rasaasta la isku waydaarsadey dagaalkii cuslaa ee maanta.
Xaalada caawa & halka lakala joogo
Xaalada caawa way degan tahay waxaase jirta xiisad magaalada ka taagan maadama aanu jirin wax heshiis ah oo dagaalka laga gaaray, wararku waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ee Puntland ay ka soo baxeen goobihii ay ilaa shaley ka dagaalamayeen iyadoo ciidamadu dib ugu soo laabteen xeryahooda lamana oga in tani qayb ka tahay dadaal ku saleysan waxaxaajood & in ay ciidamadu gaareen yoolkoodii dagaalka.
Galmudug oo dagaalka ka hadashay
Axmed Maxamed Caalin oo ah madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ugu baaqaay in dagaalada ka socda magaalada la joojiyo waxaana uu sheegay in wadahadal ay isagu yimaadaan dhinacyada dagaalamaya.
Madaxweynaha maamulka Galmudug wuxuu ku tilmaamay dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo kuwa saameeyey deegaanada maamulkiisa waxaana uu sheegay in dagaalku uu dhaxeeyo laba qabiil, wuxuu ku goodiyey in hadii dagaalku uu soo gaaro dhankooda aanay faraha ka laaban doonin.
Puntland eedeyn u jeedisay Galmudug.
Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaarada amniga Puntland ayaa lagu sheegay in dagaaladii ka dhacay magaalada Gaalkacyo maamulka Galmudug uu si qalad ah uga bixiyey fasiraad, isla markaana dagaalku aanu aheyn mid qabiil, waxaana warsaxaafadeedka lagu sheegay in maleeshiyaadka la dagaalamaya ciidamada maamulka Puntland ay ka heleen taageero hub & daaweyn caafimaad dhanka Galmudug.
Warsaxaafadeedka wasaarada amniga hoos ka akhri.
Ciidamada Dowladda Puntland oo Howlgalo ka wada Galkacyo
Kooxda Al Shabaab ayaa maanta weerar toos ah kusoo qaaday goobaha ay Ciidamada Amniga ee Dowladda Puntland kaga sugan yihiin Degmada Galkacyo.
Ciidamada Dowladda ayaa iska difaacay weerarkaasi iyadoo ay Ciidamadu ku fideen xaafadaha magaalada Galkacyo, ayna sifeeyeen goobihii ay ka soo duuleen kooxda Al Shabaab.
Dagaalkaan ayaa shalay [1 Sept. 2011] bilawday ka dib markii ay kooxda Al Shabaab xabad ku fureen Ciidamada Amniga oo damacsanaa inay soo xirxiraan koox argagaxiso ah oo barro cayiman ka abaabula dilalka qorsheysan iyo qaraxyada.
Weli lama sugin tirada dhabta ah ee dhaawaca iyo dhimashada labada dhinac, hasayeeshee Ciidamada Dowladda ayaa ilaa haatan soo qabqabtay 22-qof oo ka tirsan kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab.
Muddo 4-sanno ah ayaa magaalada Galkacyo waxaa laga waday dilal qorsheysan iyo qaraxyo soo kordhayay oo lagu laayay dad birmogeydo ah oo ka dhashay qabiilada Reer Puntland, waxaana dambiyadaasi laga soo abaabulayay goobo cayiman oo ku yaala xaafada uu dagaalkii shalay ka dhacay iyo xaafada ay Maamulka Galmudug ka degan yihiin degmada Galkacyo.
Waxaa nasiib-darro ah in madaxa Maamulka Galmudug uu waraysi uu siiyay Idaacadda BBC-da uu ka been-sheegay xaalada dhabta ah oo Galkacyo ka jirta, isagoo arrinta la aaday meel aan jirin iyo arrimo qabaa’il.
Qof kasta oo Galkacyo jooga maanta wuxuu ogyahay in kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab ay u baqanayeen dhanka Galmudug, dibna looga soo abaabulay rasaasna looga soo siinayay, halkaasoo lagu daaweenayo dhaawacyada kooxda argagaxisada, sida uu waraysigii BBC-da uga qirtay madaxa Maamulka Galmudug Maxamad Axmed Caalim.
Mr. Caalim marnakamauusan hadlin dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhaca degmada Galkacyo, iyadoo aysan dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhicin xaafadda uu Maamulka Galmudug ka degan yahay degmada Galkacyo.
Dowladda Puntland waxay xaqiijinaysaa in uusan jirin dagaal qabiil, arrintaanna waxaa daliil u ah in 4-xubnood oo lagu dilay dagaalkii maanta kana tirsanaa madaxda kooxda argagaxisada ee Al Shabaab iyo in ka badan 22-maxaabiis oo lagu qabtay dagaalka ay dhalasho ahaan ka soo kala jeedaan gobollada Soomaaliya oo dhan.
Ugu danbeyntii, Dowladda Puntland waxaa mas’uuliyad wayn ka saaran sugidda amniga dalka iyo difaaca dadka waxayna Dowladdu shacabka ugu baaqaysaa in si wanaagsan loola shaqeeyo Ciidamada Amniga oo ku howlan nabadeynta Galkacyo.
Siteenbar 2, 2011 at 7:28 pm
Walaal nabada puntland wixii ka soo hor jeeda udul qadan mayno inkastoo hada an qurbe jogo waan imaana yana jida horana tagayaa tuutahana qadanayaa dalka iyo dadkaygana waan difaacayaa waxba yaan qabiil lagu gaban